VIDEO:Toogashadii ugu yaabka badneyd ee mudooyinkan dhacda (DAAWO) – SBC
VIDEO:Toogashadii ugu yaabka badneyd ee mudooyinkan dhacda (DAAWO)
Aroor hore oo ay bishan October aheyd 11 waxaa la isugu yeeray dadka inay isagu yimaadaan fagaare weyn, waxaana dadka loogu baaqayey inay ka soo qayb galaan toogasho subaxnimadaasi dhacaysay.
Dhaqdhaqaaqa Taalibaan oo dagaalka ka wada dalka Afgaanistan deegaanada ay ka taliyaan mid ka mid ah gaar ahaan gobolka Kandahar ee Koonfurta dalkaasi ayey toogashadani ka dhacdey waxaana xukun dil ah lagu fuliyey nin dil geystey oo gacan ku dhiigle ah.
Dilkan wuxuu kaga duwanaa dilalka xukumada gacan ku dhiiglayaasha waxaa la diley sayga haweenay ninkii jeclaa uu dilka ka geystey, waxaana ninkii gacan ku dhiiglaha ahaa diley oo xukunka qisaasta ah ku fuliyey marxuumkii la diley Aabihiis oo ah nin da’da ah oo qariga xitaa aan qabsan karin oo lagu caawiyey sida qoriga loo xakameeyo xabadana loo rido.
Qisdan yaabka badan waxay ka dhacdey deegaanka Kan doo ah dhul baadiye ah oo ka tirsan gobolka Kandahar.
Ninka la qisaasay waxaa lagu magacaabi jirey Nawroz wuxuu dilay nin guursadey gabar uu jeclaa oo uu niyada ka saari waayey, maseyrkii ama hinaasihii uu ka qaaday guurka haweenaydaasi ayaa keenay in uu dil toogasho ah ku dilo ninkii gabadha guursadey.
Laakiin xukun ku saleysan shareecada Islaamka oo deegaankaasi ay ka hirgaliyeen xoogaga Daalibaan ayaa ninkaasi lagu xukumay in isagana la dilo oo la qisaaso, iyadoo dilka qisaaska ah uu fulinayo marxuumkii la dilay Aabihiis.
Filim lagu qaaday kaamirooyinka mobile-da oo lagu duubay dhacdadaasi ayaa waxaa ka muuqanaya ninka la qisaasay oo salaad inuu tukudo loo ogolaadey daqiiqadihii ugu dambeeyey nolashiisa, iyadoo sidoo kale laga arki karo muuqaalka Odayga waayeelka ah ee dilka gaysanaya oo qoriga loo toosinayo si uu ninka xabada ugu aadiyo, iyadoo waliba la leeyahay “Qori qabso”.
Laba xabadood markii ay ku dhacdey ninkii la qisaasayay tobanaankii qof ee goobta ku sugnaa ee daawanayey dilkan ayaa hal mar la soo booday “Wali wuu noolyahay”.
Qof ka mid ah dadkii ka qayb galey toogashadan ayaa sheegay in dilkan uu yimid ka markii ay shir isagu yimaadeen hogaamiyeyaasha diinta oo go’aansadey in la dilo gacan ku dhiiglaha.
Link Video-ga hoose ka daawo dhacdadaasi yaabka badan ee qisaasta ah.
Asalaama calaykum ,, wax layaaba iilama muuqdo arrinkaasi aniga waxaa la oofiyay xukun allaah subxaanahu watacaalaa ina faray wax khaladina kama muuqdo waana waajib saaran ummadaha islaamka ah kadib heshiis iyo is afgarad dhexmara qaatilka iyo maqtuulka eheladooda ama diyo ama dil waana kufaraxsanahay qaabka uu u dhacay waxaa ka xumaanaya culumaa u suuga mooryaanta dimoqraadiyadda cilmaaniyiinta (waman axsanu minallaahi xukman) anigu waxaan jeclahay kii tuug ah oo gacan lagagoynayo inay habarti ama odagi uu lacagta kaxaday kagoyso ama kagooyo inta qof ee daawanaysaa mashxarad iyo sacab iskudaraan farxad darteed gacantaasna aan sadexberi la.aasin ee laga soo laalaadiyo tuuga surkiisa (hadalka dambe waa kaftan diin maaha) xirsixuseen4@hotmail.com